Iti 38: ဝိတက္ကသုတ် (မြန်မာဘာသာ) - Itivuttaka - SuttaCentral
၃၈။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော (အလုံးစုံသောတရားတို့ကို) ကိုယ်တိုုင်မှန်စွာ သိတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား၏ ဉာဏ်တော်၌ ခေမဝိတက် ပဝိဝေကဝိတက်ဟူသော ဝိတက် (အကြံ) နှစ်ပါးတို့သည် အကြိမ်များစွာ အဆင့်ဆင့် မပြတ်ဖြစ်ကုန်၏။ ရဟန်းတို့မြတ်စွာဘုရားသည် ဆင်းရဲမရှိခြင်းလျှင် မွေ့လျော်ရာ ရှိ၏။ ဆင်းရဲမရှိခြင်း၌ မွေ့လျော်၏။ ရဟန်းတို့ဆင်းရဲမရှိခြင်းလျှင် မွေ့လျော်ရာရှိသော ဆင်းရဲ မရှိခြင်း၌ မွေ့လျော်တတ်သော ထိုမြတ်စွာဘုရား၏ဉာဏ်တော်၌ ''ဤအမူအရာဖြင့် ကိလေသာရှိသော သတ္တဝါကိုလည်းကောင်း၊ ကိလေသာမရှိသော သတ္တဝါကိုလည်းကောင်း တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမျှ ငါသည် မဆင်းရဲစေလို''ဟု ဤဝိတက်သည်ပင်လျှင်အကြိမ်များစွာ အဆင့်ဆင့် မပြတ်ဖြစ်၏။
ရဟန်းတို့ မြတ်စွာဘုရားသည် ဆိတ်ငြိမ်ခြင်းလျှင် မွေ့လျော်ရာ ရှိ၏။ ဆိတ်ငြိမ်ခြင်း၌ မွေ့လျော်တတ်၏။ ရဟန်းတို့ ဆိတ်ငြိမ်ခြင်းလျှင် မွေ့လျော်ရာရှိသော ဆိတ်ငြိမ်ခြင်း၌ မွေ့လျော်တတ်သော ထိုမြတ်စွာဘုရား၏ ဉာဏ်တော်၌ ''အကုသိုလ်ကို ပယ်အပ်၏''ဟု ဤဝိတက်သည်ပင်လျှင် အကြိမ်များစွာအဆင့်ဆင့် မပြတ်ဖြစ်၏။
ရဟန်းတို့ ထို့ကြောင့် သင်တို့သည်လည်း ဆင်းရဲမရှိခြင်းလျှင် မွေ့လျော်ရာရှိကြကုန်သည် ဆင်းရဲမရှိခြင်း၌ မွေ့လျော်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ နေကြကုန်လော့၊ ရဟန်းတို့ ဆင်းရဲမရှိခြင်းလျှင် မွေ့လျော်ရာရှိကုန်သည် ဆင်းရဲမရှိခြင်း၌ မွေ့လျော်ကုန်သည်ဖြစ်၍ နေကြကုန်သော သင်တို့အား ငါတို့သည် ဤအမူအရာဖြင့် ကိလေသာရှိသော သတ္တဝါကိုလည်းကောင်း၊ ကိလေသာမရှိသော သတ္တဝါကိုလည်းကောင်း့တစ်စုံ တစ်ယောက်ကိုမျှ မဆင်းရဲစေကုန်အံ့''ဟု ဤဝိတက်သည်ပင်လျှင် အကြိမ်များစွာ အဆင့်ဆင့်မပြတ် ဖြစ်လတ္တံ့။
ရဟန်းတို့ ဆိတ်ငြိမ်ခြင်းလျှင် မွေ့လျော်ရာရှိကုန်သည် ဆိတ်ငြိမ်ခြင်း၌ မွေ့လျော်ကုန်သည်ဖြစ်၍နေကြကုန်လော့၊ ရဟန်းတို့ ဆိတ်ငြိမ်ခြင်းလျှင် မွေ့လျော်ရာရှိကုန်သည် ဆိတ်ငြိမ်ခြင်း၌ မွေ့လျော်ကုန်သည်ဖြစ်၍ နေကြကုန်သော သင်တို့အား ''အကုသိုလ်မည်သည် အဘယ်နည်း? အဘယ်ကို မပယ်အပ်သနည်း? အဘယ်ကို ပယ်စွန့်ရကုန်အံ့နည်း''ဟု ဤဝိတက်သည်ပင်လျှင် အကြိမ်များစွာ အဆင့်ဆင့်မပြတ်ဖြစ်လတ္တံ့ဟု ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို -
''ရွက်ဆောင်နိုင်ခဲသော ဘုရားကိစ္စကို ရွက်ဆောင်တတ်သော သစ္စာလေးပါးကို သိတော်မူသော ထိုမြတ်စွာဘုရား၏ ဉာဏ်တော်၌ ထိုနှစ်ပါးသော ကြံစည်မှု 'ဝိတက်'တို့သည် အဆင့်ဆင့်မပြတ်ဖြစ်ကုန်၏။ ဘေးမရှိသော ကြံစည်မှု 'ခေမ ဝိတက်'ကို ရှေးဦးစွာ ဆိုအပ်၏။ ထို့နောက်နှစ်ခုမြောက် ဆိတ်ငြိမ်သော ကြံစည်မှု 'ပဝိဝေကဝိတက်'ကို ပြအပ်၏။
အမိုက်တိုက်ကို ပယ်လွှင့်တတ်သော နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသော ကမ်းတစ်ဖက်သို့ ရောက်သော ဂုဏ်ကျေးဇူးအထူးကို ရှာမှီးတတ်သော ရောက်သင့်သည့် အရဟတ္တ ဖိုလ်သို့ ရောက်ပြီးသော ဝသီဘော်နှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော အာသဝေါကင်းသော သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲကို ကူးမြောက်ပြီးသောတဏှာ၏ကုန်ရာ (အရဟတ္တဖိုလ်နိဗ္ဗာန်)၌ ကင်းလွတ်သော အဆုံးဖြစ်သော ကိုယ်ကို ဆောင်သော ကိလေသာမာရ်ကို စွန့်ပြီးသော အိုခြင်း၏ တစ်ဖက်ကမ်း (နိဗ္ဗာန်)သို့ ရောက်သော ထိုမြတ်စွာဘုရား၏ဉာဏ်တော်၌ (ဝိတက်နှစ်ပါးတို့သည်) အဆင့်ဆင့် မပြတ်ဖြစ်ကုန်၏။
ကျောက်တောင်ထိပ်၌ ရပ်တည်လျက်ရှိသော ယောကျာ်းသည် ထက်ဝန်းကျင် လူအပေါင်းကို ကြည့်ရှုသကဲ့သို့ ထို့အတူ ကောင်းမြတ်သော ပညာရှင် ဖြစ်တော်မူသော ထက်ဝန်းကျင်မြင်နိုင်စွမ်းသောဉာဏ်မျက်စိရှိတော်မူသော စိုးရိမ်ပူဆွေး ကင်းဝေးတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားသည် ပညာ (ဓမ္မ) ဖြင့်ပြီးသော ပြာသာဒ်ထက်သို့ တက်တော်မူ၍ ပဋိသန္ဓေနေခြင်း အိုခြင်းတို့ နှိပ်စက်အပ်သဖြင့်စိုးရိမ်ပူဆွေးခြင်းသို့ သက်ဆင်းကျရောက်နေသော သတ္တဝါအပေါင်းကို ကြည့်ရှုတော်မူ၏''ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။